यस्ता पतिलाई कस्तो सजायँ दिने ? - Everest Dainik - News from Nepal
यस्ता पतिलाई कस्तो सजायँ दिने ?
काठमाडौं, पुस २४ । यो कतिसम्मको बिडम्वना हो ? जसमा श्रीमती सधैं श्रीमानको क्रुर यातना भोग्नुपर्ने । एउटा सन्तानको लागि किन श्रीमान् सधैं आफ्नो श्रीमतीमाथि यस्तो अभद्र र क्रुरता बन्ने ? किन श्रीमतीलाई यस्तो व्यवहार गरिन्छ, हाम्रो देश र समाजमा ।
अहिलेको २१ औं शताब्दीमा पनि अन्धविश्वासका कारण सन्तान जन्माउन सकेन भन्दै आफ्नै श्रीमतीलाई क्रुरतापूर्वक पाठेघरमा बेल्ना नै फेला पर्ने गरी कतिसम्म यातना र पिडा दिनसकेको हो यी पुरुषप्रधान भनाउँदाहरुले ।
याे पनि पढ्नुस दर्दनाक घरेलु हिंसा : दाइजोकै निहुँमा जलाइन्छन् महिला
यस्तैमा, भारतको उत्तराखण्डस्थित एक नेपाली महिला यस्तै यातनाबाट पीडित भएर एक सरकारी अस्पतालमा भर्ना भएकी छिन् । यी नेपाली महिलाको गुप्तांकमा काठको बेल्ना फेला परेको देख्दा डाक्टरसमेत आश्चार्यचकितमा परेको छ ।
उनको शरीरमा बेल्ना घुसार्ने अरु कोही नभएर ती महिलाका आफ्नै पति हुन्, जो अस्पतालमै बिरामी कुरुवाका रुपमा बसेका छन् । महिला हिंसाको चरमरुपमा देखा परेको घटनाबारे यतिबेला बेलायत लगायत विश्वका अधिकांश सञ्चारमाध्यममार्फत प्रचारमा आएको छ ।
याे पनि पढ्नुस पार्टीभित्र पनि महिलाहि‌ंसा !
तर, नेपालबाट उपचारका लागि भारत पुगेको यो जोडी नेपालको कुन जिल्लाबासी हो भन्नेसम्म समाचारमा खुलाइएको छैन ।
उनीहरु भारतमै रहेका नेपाली मुलका दम्पति हुन् या नेपालको कुनै जिल्लाबाट गएका हुन् भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले नेपालबाट उपचारका लागि भारत पुगेको दाबी गरेका छन् ।’
ट्याग्स: mahila hinsa